“Boobquake” – “Horohoron”-’ny nofo miatrika ny fitakian’ny mpitarika fivavahana iraniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2010 3:16 GMT
Jennifer McCreight, mpianatra ao amin’ny Anjerimanontolon’i Purdue any Etazonia dia nangataka ny vehivavy manerana izao tontolo izao mba hanao fitafiana mihanjahanja na mampiseho kely ny lohaliny ny andro alatsinainy, ho toy ny andrana hanihany ihany, mba hanaporofoana ny tsy maha-marimpototra ny fombam-pivavahana iraniana izay milaza fa ny fanaovana akanjo tsy maotina dia miteraka horohoron-tany.
Nanomboka ny tantara raha niteny i Hojatoleslam Kazem Sedighi, mpitari-bavaka isaky ny andro zoma any Teheran hoe : “Maro ireo vehivavy no mitondra fitafiana tsy maoty….Misarika tovolahy ho lavo, manimba ny fahamaotinan'izy ireo ary mijangajanga ao anatin'ny fiaraha-monina, izay (ny vokany) mahatonga firongatry ny horohorontany.”
Nanoratra tao amin’ny blaoginy i Jen McCreight, izay misora-tena ho toy ny malala-tsaina, mpiodana informatika« geeky», «nerdy », siantifika, vehivavy manohitra ny fivavahana , nigadra tany Indiana:
manana soso-kevitra aho. Sedighi manamarika fa ny fanaovana fitafiana tsy maoty dia mampirongatra mitarika horohorontany. Raha marina izany, azon-tsika porofoina ara-tsiantifika io fanamarihana io. Mahatadidy daholo ny fatra diso be loatra mikasika ny « homéopathy » ve ianareo ? Tonga ny fotoana ho an’ny horohoron’ny nofo. Ny alatsinainy 26 aprily, hitondra fitafiana faran’izay mihanjahanja ananako indrindra aho. Eny, izay tena fitondra amin’ny alim-pandihizana. Hampirisika ny vehivavy sasany mbola miahiahy aho hanao toa ahy ary hampanaiky azy ireo an-kafaliana izay lazaina ho natoraly ambony amin’ny nonon’izy ireo. Na kilaoty fohy, raha toa izay no fihetsika tsy maoty tianao kokoa. Tena hiteraka horohorontany tokoa angamba ny fitambaran'ny vatantsika adaladala. Raha tsia, mino aho fa hahita fanazavana rasionaly i Sedighi mikasika tsy nipoiran’ny horohorontany.. Ary raha toa isika liana amin’izay nolazainy, angamba dia ho ny plaky tektonika mihitsy no ho tonga.
Ny fisehon’ny horohoron’ny nofo ao amin’ny Facebook dia mahasehaka mpitsidika 123, 680, voafaokan’izany ireo lehilahy. Avy amin’ny Facebook ny sary eo ambony.
Ary ity ny hafatra an-tsary mikasika ny horohoron’ny nofo :
Ireo iraniana ihany no nandefa fanehon-kevitra mitondra fihavaozana miady amin’ny sivana sy ny famoretana fahiny. Iray amin’ireo vao haingana indrindra ny fanehoan-kevitry ny lehilahy nitafy hijab manohana an'i Majid Tavakoli, mpianatra mpitarika mafana fo nogadraina. Toa manako maneran-tany ihany ny tantara iraniana tamin'ity indray mitoraka ity.